Ny lozabe an-doha dia singa iray tena ilaina ao anatin'ny motera mora may. Ny gasket an-doha dia miantoka ny tsindry namboarina avy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-bika amin'ny etona solika ao anatin'ny efitrano fandoroana. Ny efitrano fandoroana dia misy ny piston ary mila pre ...
Fitaovana ampiasaina amin'ny Tombo-diloilo
1. Ny tombo-kase diloilo dia misy peratra vy toy ny taolam-paty anatiny izay manome ny fitoniana ara-drafitra amin'ny tombo-kase diloilo. 2. Ny hoditra ivelany dia vita amin'ny fingotra nitrile ary fitaovana hafa isan-karazany izay ampiasaina arakaraka ny fepetra takiana. 3. Ny lohataona eo amin'ny molotry ny menaka se ...
Ahoana ny fanoloana ny gasket fonosana
Ø Esory aloha ny fonon'ny motera, mila esorinao ny fonon'ny motera. Ny mekanika dia tsy maintsy manala ny fonon'ny motera plastika mba hidirana amin'ny fonony valizy. Manaraka izany dia hesorin'izy ireo ireo singa ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny motera misy varingarina efatra, matetika dia mahatratra ny ...